नेपाली युवाको र अरबी युवतीको बि, योगान्त प्रेम कथा, जसले कयौं देशका करोडौं मानिसलाई रुवायो.. एकपल्ट छोटो समय दिएर हेर्नुहोला। -
Home News नेपाली युवाको र अरबी युवतीको बि, योगान्त प्रेम कथा, जसले कयौं देशका...
साउदीका हरेक पत्रपत्रिकामा नुरको आत्मह त्याको खबरले म आश्चर्यमा परेँ म अफिस भित्रैको एउटा क्याबिनमा कम्युटरमा ब्यस्त रहन्थे ।
तर अचानक पत्रिकामा परेको मेराे नजरले अचम्मै बनायो । हुन त मलाइ पनि कहाँ अरबी पढ्न आउथ्यो र राजको मोबाइलमा देखेको फोटोको कारणले चिनेको मात्रै हो ।
मैले प्रतक्ष्य देखेको भने थिइन ? कालो बुर्र्का साउदीमा महिलाले लगाउने कालो लुगा लगाएर यात्रारत हुन्छन् यिनीहरु । रुखले त बरु आफ्नो पात बोक्राले ढाक्दैन तर उनीहरुको शरीरको कुनै ठाँउ पनि ढाक्न बाँकी राख्दैनन् । राजलाइ झुन्ड्याएर मा–रि–एको महिना दिन नहुँदै नुरको आ –त्मह—त्याले म मात्र होइन नुरका परिवार पनि अचम्मित भए होलान्।
आज नुरको आ– त्मह –त्याको खबरले राजको अन्धकार पुर्ण दिन अनी उसलाइ गुमाएको पल झलझल आँखामा आउन थाल्यो । साउदी अरबको एक प्रतिष्ठित कम्पनिमा हामी दुबै जना सँगै काम गर्थ्यौ । हामी मतलब राज र म । हामी साउदीको मुटु राजधानी यानीकी रियादमा थियौ । राज सप्लाइ डिपा`र्टमा कार्यरत थियो ।उनी सप्लाइको क्रममा साउदीका घर घरमा जानु पर्थ्यो । त्यसै क्रममा राजको भेट नुरसँग भएको थियो ।
राज सँधै उनको बारेमा बताउथे । नुरको प्रशंसा गरेर कहिले पनि नथाक्ने राजको ब्यवहार देखेर म आफै थकित हुन्थे त्यस्तै साथको खोजीमा ।राजको ब्याख्यानमा म आफै अल`मल्ल हुन्थेँ ।आखीर नुरमा के छ यस्तो ! मलाइ राजले फोटो देखाए पनि म रुपमा कहिल्यै बिस्वास गर्दैन थेँ ।
रुपमा किन मर्छस् राज सुन्दर फुल भित्रको राग अनुराग अनी बिषादीको पनि अध्यन गर्न जरुरी हुन्छ । हुन त तेरो रोजाइ नराम्रो त हुन सक्दैन तर पनि होस् गर राज, यहाँको कानुन तैले सुनेकै छस् ।फेरी हकिकतमा देख्न नपरोस् । राज भावुक बनेर भन्थे “बिशाल,मायामा ज्यानै दिनपरे पनि म तयार छु ।
उनले दिएको यती मायानै मेरो जिन्दगीको पुर्ण खुसी बन्नेछ । हेरौ जे लेखेको छ यो भाग्यमा त्यही हुन्छ । मलाइ यही मर्न लेखेको छ भने म पराइकै माटोमा म–रौ`ला ।
हो मलाइ मेरो स्वच्छ पशुपतीमा ठाँउ नमिल्ला, बाग्मतीको पानीले चोखीन नपाइएला,चन्दनसँगै जल्न नपाइएला तर मायामा दिएको ज्यान कहाँ खेर जान्छ र ? बिशाल, हुन त म अभागी ठहरीनेछु, बिदेशको माटोमा पुरीँदा तर पनि माया भनेको माया हो ।
कहिले भेटेर त कहिले फोनबाट नै लामो समय|सम्म उनिहरुको कुराकानी चल्थ्यो । म कहिले काँही जिस्काउथेँ “राज तेरो त काम तमाम भो, भाउजुसँग मलाइ नि कुरा गरान त यार । म पनि यसो सुनौ मेरी भाउजुको स्वर जुन स्वरमा राज अल्झिएको छ ।
म आफ्नै दुनियामा ब्यस्त हुन्थे, उनीहरु आफै भित्र हराउथे । एक कान दुइ कान मैदान । उनीहरुको प्रेम नुरको घरपरिवारले थाहा पाए । उनका बाबा आमाले पुलीसमा कम्प्लेन गरे । ठुलो रडाकोनै मच्चियो ।अन्त्यमा राजलाइ फाँ`सी सुनाइयो ।
फाँसी हुने अन्तिम रात राजले एउटा पत्र लेखेको थियो र मलाइ भनेको थियो । राज यो पत्र एक चोटी पढेर नुरलाइ दे है । मैले किन हेर्नु राज र भन्दा राज भन्दै थिए , सायद तैलेनै उल्था गर्नु पर्ला बिशाल । मेरो आँखाभरी आँसु टम्म थिए । म डाँको छाडेर रुन पनि सकिरहेको थिइन । तर राजको आँखामा भने डर,त्रा`स,पिर भनेको पटक्कै थिएन । माया प्रतक्ष झल्किन्थ्यो ।
मैले हतार हतार राजको पत्र खोँले अनी पढ्न थाँले ।‘मेरी नुर जुनी जुनी जिउनु ल । तिमी त अन्तिम पटक भेट्न पनि आइनौ । तर पनि मलाइ दुख मन छैन । किनकी म तिमी जन्मेको माटोमा हाम्रो माया बिसर्जन गर्दैछु।
त्यसले यतीका पछी किन आ त्मह त्या गरी त थाहा छैन यार । मैले केही थाहा पाउन सकेको छैन । कारण के हो कसो हो अब पत्रीका पढ्न जानेको भएपो । एक छिन है मेल आएको रहेछ । अफिसीयल होला । मेल नयाँ ठेगाना`बाट आएको थियो । मैले अल्मलीदै खोँले ।अरबीमा लेखीएको भएर मैले पढ्न जानीन र कुन्जनलाइ भने ।
मलाइ फोन,नेट सबै तिर बन्देज लगाइएको थियो । आज मात्रै सबै थोक बाट फुकुवा गरीएको हो । मलाई मेरो साथीले एउटा भिडियो हेर्छस् भनेर दिएको थियो । त्यो भिडियोमा राजलाइ झुन्ड्याएर मारी`एको रहेछ । जुन कुरा मैले सहन सकिन । भिडियो हेर्नु लगत्तै राजको पत्र पनि पाँए । उहाँ सँग मैले पनि पत्रमा भेँटे ।
बिशाल बाबु हजुरहरुले त मलाइ निष्ठुरी भन्ने सोच्नु भएको होला ।त्यसैले मैले हजुरलाइ मेरो बारेमा भन्ने यही एउटा मेलको साहारा लिँए । म निष्ठु—-री होइन बिशाल बाबु ।
म मेरो जिन्दगी अब अरुको नाम कसरी गरौ बिशाल बाबु मेरा आमा बाबा चाहनु हुन्छ म अरु कसै सँगबिबाह गरौ ।तर राजलाइ सुम्पियको यो तन मन कसरी म जिउदै मरेर अरुलाइ सुम्पिदै राजको मायालाइ अपहेलना गरौ ।त्यसैले मैले आ`त्मह त्या गर्ने निर्णय गरेँ ।
मैले गल्ती त गरीन नी है बिशाल बाबु बिशाल बाबु मैले हजुरलाइ नदेखे पनि हजुरको बारेमा राजको ओठ बाट सबै सुनेको छु ।त्यसैले हजुरले निर्दोष ठान्नु भयो भने म राजलाइ उगएको ठाँउमा गएर मेरो मायाको सर्जिम बक्ने हजुर`लाइ देखाउन सक्नेछु ।मलाइ माफ गर्नुस् ल बिशाल बाबु ।
Previous articleबिचरा ! दुवै हात नभएका यी दाजु माछा मा*रेर ६ जनाको परिवारलाई एक्लैले पाल्छन (भिडियो हेर्नुस्)
Next articleदुखद खबर: मलेसियाको टप ग्लोबमा कार्यरत नेपाली श्रमिक पुष्पा तामाङ ड्युटीकै क्रममा ढलेर म’रे।